Gbasara anyị - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Vinyl Nzuzo ngere Kit
Picket ngere Kit
Aluminom ngere Nkebi
Nzuzo Nzuzo White Lattice
Omuma Vinyl Railing Nkebi
Preassembled steepụ igwe
Otutu odide Railing Post Cap
ngere ịnyịnya & AKA
Classickwanyere Classicnyịnya Omuma PVC
decking & ọzọ ngwaahịa
Igwe anaghị agba nchara Solar Path Light
Exkwanyere Mpụga Wall nghọta plate
Vinkwanyere Vinyl N'èzí Plastic Decking
AKW MATKWỌ AKW .KWỌ
SOkwanyere Blọ ụlọ ihe
Ndị Anyị Bụ & Ihe Anyị Na-eme？
Shanghai Longjie Plastics bụ ọkachamara na-emepụta PVC ngwaahịa extrusion. Na ihe karịrị afọ iri ụlọ ọrụ na mbupụ ahụmahụ, anyị mepụtara anyị ngwaahịa akporo ka Rakwanyere railing, fencing, vinyl siding, decking, mmiri ozuzo gọta, ịkwanyere ịkpụzi na ígwè na Ogwe igwe aluminom, wdg Long Jie team ga-arụ ọrụ na R&D ma nye ihe ngwọta okike maka ndị ahịa anyị gburugburu ụwa site na ngwaahịa na ọrụ anyị kacha mma. Obi siri anyị ike na Long Jie ga-abụ ezigbo onye gị na ya na-atụ anya ịkwado gị!
Hi-tech n'ichepụta igwe
Anyị nwere ahịrị mmepụta extrusion 12, ikike extrusion kwa ụbọchị bụ ihe dị ka tọn 30, otu pelletizer na igwe na-agwakọta akpaka atọ. Ngwa 2 nke igwe na-arụ ọrụ igwe jigsaw, 2 eserese nke igwe na-akpụ akpụ, usoro 3 nke igwe na-eme mkpọtụ, usoro 2 nke igwe na-ejikọ ngwa ngwa, 1 setịpụrụ igwe,
Ike R & D Ike
Anyị nwere ndị injinia 5 na ebe ntanetị & r. Ha bụ ndị ọkachamara ọkachamara na-niile onyinye onyinye na ọtụtụ afọ nke na-elekọta mmadụ na-arụ ọrụ ahụmahụ. Ha na-etinye aka na njikwa azụmaahịa, atụmatụ azụmaahịa, azụmaahịa, azụmaahịa mba ụwa, mmepe ngwaahịa, na ndị isi ndị ọzọ. Ha maara usoro njikwa nke usoro akụ na ụba dị iche iche.
Dị njirimara nke ndị otu njikwa:
Agụmakwụkwọ: ogo mahadum ma ọ bụ karịa, ụlọ ọrụ siri ike,
Ahụmịhe ọrụ: Ọtụtụ afọ nke ahụmịhe mmekọrịta na ahụmịhe ọrụ, nwere arụmọrụ pụrụ iche na ngalaba ọkachamara yana ikike ọhụụ pụrụ iche.
Mmekọrịta mmadụ na ibe ya: Nwee ịnụ ọkụ n'obi na mmekọrịta chiri anya maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọkachamara ọkachamara: Iguzosi ike n'ezi ihe, soro ụkpụrụ ụlọ ọrụ ahụ, rube isi n'iwu obodo na ụkpụrụ omume mmekọrịta.
Coreteam onye isi:
Liu lei: Nka na ụzụ director nke ụlọ ọrụ
Director nke ụlọ ọrụ mmepe na imewe
Jighi Ezi Ogo
1 ọkachamara ipqc nwere nkà azụmaahịa nwere nkà na ngalaba extrusion na nkwakọ ngwaahịa;
2 anyị nwere usoro zuru ezu iji hụ na ị rụpụta ngwaahịa dị elu;
3 anyị na-enye ndị ọrụ ume agbamume dịka ọrụ ha si arụ;
5 anyị nwere usoro nyocha ngwaahịa zuru oke, awa 2 nke nyocha zuru oke na nyocha ọhụụ, nzaghachi ngwa ngwa mgbe achọtara nsogbu, ma soro usoro mkpebi ahụ ruo mgbe edozi nsogbu ahụ kpamkpam, ma dee akụkọ na-adịghị mma maka mkpokọta ọzụzụ ọzụzụ oge. data;
6 anyị nwere ọzụzụ mgbe niile maka ndị ọrụ dị mma iji meziwanye ikike ọrụ ọkachamara na akparamaagwa, iji gbaa ha ume ijide n'aka na ihe niile ha mere bụ iru ụkpụrụ
7 anyị na-eji ọtụtụ ụzọ nwalee ogo ngwaahịa a.
1.) nkịtị nnyocha ụzọ, anyị merela agadi cantilever doo ule igwe, na-ada bọl ule igwe, rockwell ekweghị ekwe testers, tensile igwe, wdg.;
2.) usoro nyocha kemịkalụ, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ mgbe niile, onye na-enyocha nká, mita ọcha;
3.) usoro nyocha ndu. Anyị na-enyefe ngwaahịa anyị ka a nwalee ya site na ụlọ ọrụ nnwale nke ndị ọzọ ruru eru na akụkọ nyocha; ọ na-achọkwa ka onye na-ebunye ya nweta akụkọ nyocha ihe onwunwe dị na ya;
4.) ụdị ụdị nnwale usoro, nnwale oge niile, nlele nlele, wdg;
5.) ụzọ nyocha ụzọ nyocha, ndị otu na-anwale ogo bụ aka ochie bụ ndị na-arụrụ ụlọ ọrụ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ, ha nwere ikike dị iche ịmata nsogbu ngwaahịa anyị nwere; na nlele, ihe nlele nke gosipụtara njirimara ngwaahịa nwere ike weghachite nke ọma maka nyocha sayensị.
Ballda bọl na-agba
Igwe nyocha ule cantilever
Standard agba ìhè igbe
Ovennọgide na-enwe okpomọkụ oven
Production ikike Ngosipụta
Anyị extrusion igwe na-niile zụrụ ụdị jinwei ígwè co., Ltd., Osote onyeisi oche nke anụ ụlọ plastic ígwè ụlọ ọrụ mkpakọrịta na china. Anyị nwere igwe iri na abụọ iri-isii na ise na ụdị isii na-enyere 45, yana usoro mmepụta ọ bụla nwere ikike mmepụta kwa ụbọchị nke tọn 3 nke ngwakọta pvc. Ntughari nke nzuko azu na ngwugwu bu ihe eji eme ihe nke oma, ya na ndi oru 40 nwere ikike, nke nwere ike iricha ikike ikike nke mbu; kwenye na ikike mmepụta kwa ụbọchị nke tọn 30 nke ngwaahịa.
Banyere àgwà akara:
N'ozuzu ụlọ ọrụ mmepụta ihe ngosi:
Factory ọrụ ngosi:
Factory nkwakọ ọrụ ngosi:
Ike Nka na Uche Na Ike & r & d ikike
Kemgbe ya oruru, anyị mgbe niile gbasoro echiche sayensị mmepe, na-ewere technology nnyocha na mmepe na pesonel ọzụzụ dị ka anyị mmepe mgbaru ọsọ. Anyị nwere ngalaba r & d raara onwe ya nye, na-adabere na nkwado ọrụaka sitere na isi ụlọ ọrụ shanghai, ma nwee ahụmịhe bara ụba na ndị ọrụ ọrụ ntanetị & ọrụ ọhụụ. Anyị na-etinye oke mkpa maka nyocha na mmepe nke ngwaahịa ọhụụ ma ọ bụ usoro ọhụụ, na-etinye ego n'ọtụtụ nyocha na mmepe kwa afọ, enweta nsonaazụ dị mma, ma tinye akwụkwọ maka ọtụtụ ikike.
Na ngwaahịa nnyocha na mmepe, anyị na-ewusi mgbanwe na imekọ ihe ọnụ na anụ ụlọ nnyocha institutes dị na teknụzụ mmepe na ahịa ina. Gbanwee nsonaazụ sayensị pụta na arụpụta site na teknụzụ teknụzụ yana mmepe mmepe, yana mepụta uru maka ụlọ ọrụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị mepụtara ụdị fences na nchebe dị iche iche kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ubi, gụnyere ubi, nchedo ime ụlọ, ogige, ogige, ogige ịnyịnya na ụdị mpaghara ndị ọzọ, nke mere na erere ngwaahịa ndị a na Europe, United States, Australia , ohuru ohuru na South Asia. Ala.
Anyị guzosie ike a ogologo oge ekwenye nnyocha na mmepe mmekọrịta na anhui conch otu, na-eduzi miri emi nnyocha na mmepe na nkịtị na chemical Njirimara nke n'èzí profaịlụ formulations, na-enweta ezi ihe. Na nkwalite na iji ya na ahịa, onye ahịa ahụ nwere afọ ojuju nke ukwuu ma bụrụ onye otu onye ghọtara.
Usoro njikwa ụlọ ọrụ r & d
1) mgbe ị natara ntụziaka r & d, ngalaba ọrụaka na-ahazi ndị otu na ndị otu mmepe, na-ekpebi onye isi nhazi, na-ahazi atụmatụ r & d, ma na-akwadebe "Atụmatụ na atụmatụ mmepe"
2) onye na-ahụ maka imepụta ihe na-ekpebi ọdịnaya nke ihu dị iche iche na teknụzụ dịka atụmatụ atụmatụ na njirimara na njirimara nke ngwaahịa a, na-agwa ndị nrụpụta ihe nkata na teknụzụ, wee na-achịkọta "Ntinye ntinye na mmepe ndenye"
3) onye mmebe ahụ na-echepụta atụmatụ ngwaahịa ahụ dịka ntinye ihe eji emepụta. Onye isi teknụzụ kpọkọtara ndị ọrụ anyị dị mkpa iji mepụta ngosipụta atụmatụ. Mgbe emechara atụmatụ ahụ, onye na-ahụ maka imepụta ihe ahụ na-arụ ọrụ teknụzụ dịka atụmatụ a kwadoro, gụnyere eserese na usoro, ma hazie ndị ọrụ dị mkpa iji nyochaa atụmatụ ahụ, dekọọ ndekọ, ma kwadebe "Akuko na nyocha nyocha".
4) onye mmebe ahụ na-eme nnwale nnwale na ngwaahịa ahụ dabere na nsonaazụ nyocha ahụ, ma na-akwadebe "Nkwupụta nyocha na mmepe nyocha"
5) mgbe ule ụdị ngwaahịa ahụ ruru eru, onye mmebe ahụ ga-adọta nhazi nhazi ngwaahịa na usoro nhazi usoro, onye ndu imewe ga-enyocha ya, onye nchịkwa teknụzụ ga-ewepụta ya mgbe nkwenye gasịrị, ma kwadebe "Ndepụta na mmepụta mmepụta ndepụta"
6) mgbe enyerechara akwụkwọ teknụzụ ngwaahịa ahụ, ngalaba azụmaahịa na-etinye iwu maka iheomume, ngalaba ọrụ na-emepụta ihe atụ dịka akwụkwọ teknụzụ si dị; ndị na-ese ihe na-enyocha ma gosipụta ihe atụ ahụ ma na-eme mkpesa banyere nnwale nnwale.
7) mgbe ihe ịga nke ọma sample ikpe mmepụta, obere ogbe ikpe mmepụta ga-rụrụ. Onye na-ahụ maka imepụta ihe na-akwado arụmọrụ nke ngwaahịa na njirimara teknụzụ site na nyocha arụmọrụ teknụzụ ngwaahịa yana nzaghachi onye ọrụ, ma na-akwadebe "Nkwupụta nkwupụta na mmepe".
8) mgbe emechara ihe a, onye na-ahụ maka imewe na-elebara anya na ojiji nke ngwaahịa ọhụrụ ma na-emeziwanye ngwaahịa ọhụrụ.
Guzobe ulo oru ndi ahia "ndi ahia". Ihe isii nke ọdịbendị ụlọ ọrụ: Ọnụ, ụgwọ, ọrụ; ebumnobi, usoro, na nyocha. Nkà na ụzụ na njikwa ihe ọhụụ na-agafe usoro dum nke ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ.
Ihu ọnọdụ ọhụrụ na ohere ọhụụ, suzhou langjian wepụtara echiche ebumnuche nke "Century enterprise, centennial innovation, centennial brand".
1) atumatu nke mba uwa agbanweela site na ulo oru nzuzo nke ndi China nwere oru ohuru nke nwere udiri ndi mba uwa na oru ndi oru na ike ha.
2) atụmatụ ịbanye na ahịa-gbanwee ọnọdụ ahịa ebumnuche.
3) atụmatụ mmepe ngwaahịa-mepee ngwaahịa dị elu
Culturelọ Ọrụ CultureCustomer Group Photo
Ngosipụta nke Projectlọ Ọrụ
Ngosipụta Ngosipụta nke Ike
ịmalite ịbawanye uru taa!
# C, Nke 1305, Huajiang Road, Minhang District, Shanghai, China